I-Metabolism kunye nokuguqulwa kwamandla emzimbeni womntu
Into yokuqala efika engqondweni xa ikhankanya i-metabolism, ityweight. Wonke umfazi ngokubanzi uyazi ukuba ukuba lolu tshintsho luphukile, lunokuchaphazela kakhulu imbonakalo. Kwaye kunjalo ngokwenene. Kodwa siyazi ukuba yonke into yindlela yokuguqulwa kwamandla kunye nokuguqulwa kwamandla emzimbeni womntu akancinci. Kodwa oku kubaluleke kakhulu ekuphatheni kwendlela yokuphila enempilo kunye nobuhle balo naliphi na ibhinqa ...
Uya kumangaliswa, kodwa ukuxiliswa kwezinto ezidalwa yi-metabolism akusiyo into esizalelwe ngayo. Sihlakulela kwaye "siyilungisa" kwimikhwa yethu, indlela yokuphila nokuziphatha. Ngokubanzi, siyasichaphazela. Ngoko, sinokufunda ukuchaphazela ukwenzela ukuba i-metabolism ibe yintsebenziswano ebomini, kungekhona isitha esibi kunazo zonke. Singazenza ukuguqulwa kwamandla emzimbeni wethu ngendlela efanelekileyo, ukwenzela ukuba inzuzo kunye nempilo, kunye nembonakalo kunye nomoya ngokubanzi.
Ukunqunywa kwesantya kunye nokuguqulwa kwamandla emzimbeni womntu
Kukho iinkcazelo ezininzi ezinzima zeli gama, apho abantu abaqhelekileyo abangaqondanga ngokupheleleyo kwaye baphume ngokukhawuleza ngaphandle kwentloko. Makhe sikwenze kube lula: i-metabolism kwaye amandla akho emzimbeni atshise iikhalori ukugcina ubomi. Umzimba womntu uhlala uvutha iikhalori - nganye iyure, yonke imihla, yonke impilo. Isantya salo mlilo siyahluka kwaye kuxhomekeka kwizinto eziliqela. Yintoni eyimpembelelo enkulu kwi-metabolism? Impendulo ilula: lo bunzima beethambo zomzimba. Okwengeziwe esinayo, ngokukhawuleza i-metabolism kunye nokuguqulwa kwamandla emzimbeni, iikholori ezininzi zitshisa umzimba wakho. Imisipha ihlala izicubu ezinokuphumelela ngokugqithiseleyo "zidla iikhalori", ezisebenza kuthi iiyure ezingama-24 ngosuku, iintsuku ezi-7 ngeveki, iintsuku ezingama-365 ngonyaka. Ngamafutshane, iimisipha ezingaphezulu - i-metabolism engcono. Ngaba inzuzo yokudlala imidlalo iyacaca? Kodwa akukho konke.
Izinto ezichaphazela isisombululo:
Iimfucu ze-muscular: inombolo enye kuzo zonke izinto ezichaphazela imetabolism, ngoko kungabikho ukwesaba kwayo.
Ukutya kwexesha elide: Sekude ixesha eliphakathi kokutya, ukuphuculwa kwe-metabolism kunye nokuguqulwa kwamandla. Umzimba unciphisa umetabolism ukugcina amandla xa ixesha phakathi kokutya likhulu kakhulu.
Umgangatho womsebenzi: into ebalulekileyo, kodwa ingenamsebenzi ngelixa inani leekhalori alihambelani neendleko zamandla zomzimba.
Uhlobo lokutya: Ukutya kufuneka kulungelelaniswe, zonke izakhi zesondlo kufuneka zinikezelwe, ingakumbi njengezinga leoli. Ukutya kunye nomgangatho ophantsi weoli kunokuchaphazela ukuveliswa kwamahomoni, okukhokelela ekunciphiseni kwe-metabolism nokuguqulwa kwamandla.
Umgaqo-siseko womzimba: ngaphezu kwe-70% yeenkqubo zokuphila emzimbeni womntu kuxhomekeke kumanzi. Ukuchithwa kwamanzi okuncinci kubangela ukuncipha kwinqanaba le-metabolism ngamaphesenti amathathu.
I-Genetics: into eyenziwa ngumntu ngamnye (enye i-metabolism ekhawuleza, abanye bahamba ngokukhawuleza.) I-Genetic ayitshintshi, nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba kufuneka ulahle izandla zakho ulindele ukuba ubunzima bungaphezu kwekhulu.
Ezinye izifo ziphazamisa ukuphazamiseka kwemizimba (kwaye kungekudala, abaninzi bakholelwa). Ngokomzekelo, i-diabetes mellitus, iingxaki ze-thyroid zingaba nefuthe elikhulu kwi-metabolism nokuguqulwa kwamandla emzimbeni womntu.
Ukuxinezeleka: i-metabolism iyancipha ngokuzisa uxinzelelo olongezelelweyo kunye nokukhungatheka kwiinkqubo ezininzi zemvelo. Ukongezelela, ivelisa ukuveliswa kwezinto ezingathandekiyo ezichaphazela iinkqubo ze-metabolic, ezifana ne-hormone cortisol. Ukongezelela, abantu abanengxaki yokunyamezela bavame ukusela ngokweqile. Utywala ngokwalo yimbangela ebalulekileyo yokukhathazeka kwamagciwane.
Ngaba i-metabolism iyithintela iminyaka nangayiphi indlela? Hayi! Ngokuchasene neenkolelo ezidumileyo, iminyaka yobudala ayikwazi ukuba yimbangela ebalulekileyo ye-metabolism. Ewe, isantya seenkqubo zokuxilisa umzimba sinciphisa iminyaka yobudala (ngo-7% ngamnye kwiminyaka eyi-10), kodwa ubudala ngokwalo abuyiyo icandelo eliphambili ekunciphiseni ukusebenza kakuhle.
Ezi zimbini zimbangela zokuphazamiseka kwemethambo.
Ukunciphisa umthamo wezicubu ze-muscle ngokusebenzisa ukulahleka kwekhalori. Oku kunokuba negalelo ekudleni "okungalunganga". Xa udla ukutya okuzenzekelayo (umzekelo, izithelo kuphela), ngelixa wenza imidlalo. Umzimba awunanto yokuthatha amandla ngaphantsi komzimba, kwaye uqala "ukutya" izihlunu. I-metabolism iyaphazamiseka, ngoko kunzima ukubuyisela, kuba akuyi kuba lula ukwakha izicubu zomzimba. Kodwa ubunzima benqatha buqala ukwanda ngokukhawuleza, bukhulu kakhulu.
Ukunciphisa umsebenzi ongokwenyama ohambelana nobudala okanye ubuvila obuqhelekileyo. Ukungabikho konke ukunyameka komzimba kunzima kunokuba kuninzi kwabo. Ngokuhlala rhoqo okanye indawo yokulala, umzimba awukwazi ukuguqula amandla kuwo onke kwaye i-metabolism ayigcini nje - iphantse ingekho. Ngenxa yoko - zashlakovka inyama, ukunciphisa umzimba, ubunzima obukhulu, ukudandatheka kunye nexesha elifutshane lokuphila.
Ininzi ishukela egazini. Ingaba ngumphumo wokugula okanye ngenxa yokungondleki. Kule meko, i-metabolism iphazamiseka kakhulu, kodwa ixeshana. Ngokukhawuleza ukuba izinga lokushukela libuyele kwisiqhelo (ukuba liza) - utshintsho lwamandla emzimbeni lubuye lubuyele kwinqanaba lokuqala.
Izindlela zokulawula phezu kwe-metabolism
1. Ukuhamba. Intlangano nganye ichaphazela imisipha, kwaye isisombululo ngasinye sesisombululo sesistim. Ngoko ke yonke i-metabolism kunye nokuguqulwa kwamandla emzimbeni wakho kuphucula.
2. Ukutya. Isondlo esifanelekileyo sinika umzimba ngesilinganiso esifanelekileyo seekhalori, kwaye siyakwazi ukuguqula amandla angcolileyo. Ngokufanelekileyo, umzimba kufuneka ufumane iikhalori ukusuka ekudleni kumancinci amaxesha onke ama-3-4 iiyure.
3. Amanzi. Kufuneka uphuze malunga neekitha ezimbini zamanzi ngosuku. Ewe, oku kuxhomekeke kwizinto ezithile. Ukususela kwiminyaka, ixesha lonyaka, izinga lomsebenzi. Ngokubonelelwa ngokusemgangathweni komzimba ngamanzi, isisetabolism iya kuba yinto efanelekileyo.
4. Umoya. Okumangalisa ngokwaneleyo, kodwa ukuphelela akusoloko kunomusa. Njengoko kunjalo, nangona kunjalo. Umntu onomdla, othembekileyo, umntu ongenakho uxinzelelo obunqabileyo unganqabana nesifo sengxaki. Ayinakugqithisa kakhulu okanye ikhulu. Ngaphandle koko, ezinye izinto ziphazamisa.
Ukusetyenziswa kweoli efunekayo
Ukukhuseleka ngokukhawuleza: Izizathu kunye neendlela zokwelapha
Izilwanyana ezinomsoco ezinempilo njengesiseko sempilo yabasetyhini
Ukungabikho kwamalungelo kubasetyhini, inkcazo
Indlela yokulahlekelwa ama-kilogram e-5 ngeveki: fumana i-secret 4 ecacileyo!
Ubuhlungu: iindlela zokuphanda
I sandwich nge caviar
Umbala obomvu ngaphakathi kwekhitshi
Izityalo ezingaphandle: i-bryllia
Ubusi kunye namayeza ayo
Ukuchonga isifo kwindawo ye-acne
Iimpawu ezincedo zamanzi amaminerali
Inzulu esuka ku-feta cheese
Indlela yokuqonda ukuba abo bajikelezayo abahlonishwayo: 5 iimpawu eziphazamisayo
I-Horoscope ngo-Disemba 2017-ibhinqa-iGemini - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Izilwanyana zamanqanaba ezikhumba
Ziziphi iimpawu kufuneka umphathi ofanelekileyo?
Kuphi ukuchitha iveki kunye nabantwana abancinane kunye nabahlobo?
Ikhukhi yokucola emgqeni
Risotto kunye neemveliso zokutshaya